Dibana neeMidlalo eziPhambili xa ungenayo i-Intanethi Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Juni 24, 2019 0 IiCententarios 645
Ngaba kuye kwenzeka ukuba ukhuphele umdlalo kwaye xa ungenayo i-intanethi umdlalo ungasebenzi? Uninzi lwemidlalo okwangoku zifuna uqhagamshelo lweintanethi ukuze luqhutywa. Nangona kunjalo, asinakusoloko sinxibelelana. Ukusuka apho, ukubaluleka kokwazi eyona ilungileyo Imidlalo xa ungenayo i-intanethi.
Ke uyolo aluyi kuba nekhefu, kwaye unako dlala ngokungasikelwanga mda, ngaphandle kokuchitha idatha okanye ukuhlala uqhagamshelwe yi-wifi. Kukho iindawo ezingaphandle kude nesixeko ezingenalo naluphi na uhlobo lomqondiso, kodwa ulonwabo luhlala lukhona.
Kule posi, ndizisa kuwe eyona midlalo ilungileyo ukuyidlala ngaphandle konxibelelwano lwe-intanethi. Njengale izakuba kumnandi kakhulu Kwaye uya kubeka isithukuthezi ecaleni.
I-20 ephezulu yemidlalo engcono ngaphandle konxibelelwano lwe-Intanethi
Nalu udidi lwemidlalo ye-20 emnandi xa kungekho nxibelelwano lwe-intanethi. Yazi!
#20 Ukuqhutywa kwetempile 2
Yiyo yeklasi kwimidlalo, ukuba ufuna ukudlala ngokungapheliyo, apho uya kuqhuba khona ngaphandle kokuma, ukoyisa umqobo ngamnye kwaye ugqithe amanqanaba.
Inika imephu eyahlukeneyo ukuphonononga imihlaba eyahlukeneyo, ukongeza, imizobo yayo ilungile. Ngalo mdlalo awuyi kuba nexesha lokuziva unesithukuthezi, kwaye eyona nto intle, awudingi unxibelelwano lwe-Intanethi.
#19 Amagama enqamlezo
Este umdlalo wobukrelekrele lukhetho olukhulu ngalo lonke ixesha. Isekwe ebhodini equlathe inani loonobumba kungekho-odolo ithile, kwaye kwezi leta kuya kufuneka wenze amagama.
I ngcamango Yenza amagama amaninzi ukuba unako, kwaye ngaloo ndlela ukwazi ukufumana amanqaku afunekayo ukufumana isifuba. Ezi zifuba ziya kunika amabhaso othusayo, amanqaku ongezelelweyo okanye uya kuya kwinqanaba elilandelayo ngaphandle kokuligqiba.
#18 Qhagamshela Zonke
Kuhle qhinga kunye nobukrelekrele umdlalo. Kulomdlalo kuya kufuneka uthathe ukhenketho lweendawo ezahlukeneyo zokuqalisa, eziphakathi kunye neziphelayo.
Umceli mngeni usekwe yenza ukhenketho ngaphandle kokuchukumisa imigca ebomvu. Njengoko usiya ngaphezulu kwamanqanaba, umdlalo uya usiba nzima, ukudibanisa uhlalutyo kunye noxinzelelo.
Inqanaba ngalinye liza kuba ngumceli mngeni omtsha. Kodwa nikela ingqalelo! Idla ngokuba ngumlutha kwaye ungahlala wonwaba naninina, naphi na.
#17 Turbo ngokukhawuleza
Yinto emnandi umdlalo wokulinganisa we-kart, ilungele imidyarho kunye nabathandi abonwabisayo ngokupheleleyo.
Kule mdlalo uya konwaba nabanye imigibe ekhawulezayo kakhulu kangangeyure Kwaye eyona nto ilunge kakhulu! Ngaphandle kokukhupha idatha yokukhangela okanye uqhagamshelwe kwi-intanethi.
Yiyo umdlalo weqhinga lokuphatha elihlekisayo, esekwe ekudaleni indlela yokuhamba kunye nokuhamba kwabahambi. Kule game ungabonelela ngenkonzo yezothutho, kwaye ufumane amanqaku kunye nezibonelelo.
Kwakhona, unako Yila iindlela zothutho kwaye ujoyine iindawo oya kuzo, ukusebenzisa njengezithuthi zoololiwe, iinqanawa kunye neenqwelomoya. Umdlalo omkhulu apho unokuthi uphuphe ngokudala indlela yakho egqibeleleyo.
Ngumdlalo ochazwa njenge iphazili etyibilikayo kwaye ithathwa njengeCandy Crush yabahlohli. Inokutsala iithayile kwigridi, ukuze udale ukudibanisa i-2048 tile.
Ukwenza le tile, kuya kufuneka zihambise kuyo nayiphi na indlela yendlela nokulawula ukongeza iiseli zexabiso elifanayo.
Banokuba kuphela yongeza i-2 nge-2, kodwa xa usenza intshukumo uza kwenza ezinye iithayile ngeenombolo ze2 okanye ze4. Ukwenza iintshukumo ezininzi kunokukushiya ungenandawo ebhodini kwaye ngaloo ndlela uya kuba uphulukene nomdlalo.
Ngumdlalo omnandi nolula, apho ixesha liya kudlula ngaphandle kokuyazi, ukusukela Uya konwaba xa ucinga malunga nentshukumo nganye.
Nguye umdlalo wekhadi oqhelekileyo, iluncedo kakhulu ukuba awuyazi ukudlala eminye imidlalo. Ukongeza, unokufumana ukuzonwabisa okungenamkhawulo.
Le solitaire ikunika iintlobo ngeentlobo, kubandakanya iinguqulelo ezimbini zeKlondike, ezintathu zesigcawu, iiFroty Thieves, iPiramidi, igalufa, kunye neselfowuni yasimahla.
Mhle umdlalo wezinto ezinomdla, iqulathe ukuwela ihlathi elihle eligcwele iimfihlakalo ezinkulu. Eli hlathi ligcwele izithintelo kunye nomgibe, ukunqumla kumaqonga ahlukeneyo yonke indlela.
Ine- umgangatho wegrafiki onononophelo kakhulu, kukunika i-adventure entle kunye nolonwabo oluninzi.
Nguwo umdlalo we-cube odumileyo. Kuyinto umdlalo wokuhlola kunye nokwakha Ukugqwesa kwaye kubonelela ngovuyo olukhulu.
Kuyo unokuhlola umhlaba ongenasiphelo, kwaye Yakha into onokucinga ngayo, Ukulinganisa ngumda. Ungasebenzisa iindlela ezimbini. Kwindlela yokuyila, izixhobo zakho ziya kuba zingapheliyo kwaye wenze oko ukufunayo. Olunye uguquko kukusinda, apho kuya kufuneka ufumane izixhobo ukuze ufumane izixhobo kunye nokukhuselwa kwizilwanyana nakwizidalwa eziyingozi.
Ungathi yiyo umdlalo wepuzzle Eyona nto inoyolo kakhulu kwihlabathi, ke, ibonisa ukuba kulula kwaye kumnandi. Ukuguqulwa kwayo kuguqukela kuyo yonke iminyaka, kubantwana nakubantu abadala.
Isebenza njengoqeqesho lobuchopho ukuze gcina ingqondo ibukhali kwaye isebenza. Ngokungathandabuzekiyo yenye yezona zinto zilungileyo ngaphandle kwe-intanethi.
#10 Iintaka ezinomsindo
Bamele umdlalo neentaka aziwa kakhulu kwihlabathi eya kukunika iiyure ezonwabisa, ngaphandle kwesidingo sonxibelelwano.
Ukusuka kubo unokufumana iinguqulelo ezininzi, kwaye udlale ukusuka kwiilizwe ezahlukeneyo kukuthatha kuwo onke amanqanaba obunzima. Ithathwa njenge umdlalo wephazili oqhelekileyo.
#09 I-Asphalt 8: I-Airborne
Ngumdlalo ofanelekileyo wabathandi ukuqhuba imoto, eya kukunika iigrafikhi eziphezulu. Kuyinyani ukuba, umdlalo unzima. Nangona kunjalo, emva kokufakwa uya kuba nexesha elide lolonwabo.
Uya kuba nayo iindidi zeesekethe kunye neemoto ke unokukhetha oyithandayo Ekuqaleni, umdlalo uya kukunciphisa umda kwizibonelelo, kodwa njengoko usiya phambili uya kuvula iinketho zokuphucula.
#08 Umdyarho wokuHamba weNduli i2
Ukonwabisa umdlalo wokubaleka kwifomathi ye-2D, equlathe ukungavumeli inqaku liphezulu lemoto. Uya kuba noyolo olukhulu lokuhlola iitrains ezahlukeneyo, kunye nokukhetha iimoto ezahlukeneyo.
Chaza inguqulelo apho ungadlala wedwa kwaye ufumane ezonwabisa ngaphandle kokuchitha idatha yokukhangela.
#07 Ukutyhoboza kwepipi
Ngenye ye imidlalo oyithandayo kwihlabathi liphela, ebalaseliswe linani lokukhutshelwa kwihlabathi liphela. Ukuthandwa kwayo kuba, xa ukhutshelweyo akusayi kufuna i-intanethi ukuba uqhubeke nokudlala.
Ngumdlalo obonisa amanqanaba angenasiphelo, kwaye uninzi lwenziwe iinguqulelo ezininzi, eziya kukuqinisekisa ukuba uyonwabisa ixesha elide. Ngaphandle kwamathandabuzo, ngumdlalo lowo iya kuba ngumlutha, apho kuya kufuneka udibanise iindibaniselwano zokuphatha ebhodini.
Kwaye khumbula! Ezona zinto zidibeneyo uzenzayo, uya kufumana amanqaku aphezulu Ukugqiba inqanaba.
#06 Iziqhamo ninja
Excelente Umdlalo owenzelwe abantu abadala kunye nabantwana. Iqulethe ukuba ngumsiki weziqhamo weyona ninja, ngokutyibilika umnwe wakho kwiscreen, usika iziqhamo eziphuma.
Ubunzima buvela, xa kuphuma iziqhamo kunye neempompo, ukuba xa zichukumisekile zithathe iziphumlisi okanye ziya kukwenza ulahlekelwe.
Njengoko umdlalo uqhubeka Uya kufumana i-combos kunye nebhaso lokumangalisa. Ngaphandle kwamathandabuzo, ukhetho olukhulu kwezo ntsuku zidikayo kakhulu.
#05 Ukonwaba kukaAlto
Yiyo umdlalo wepirouette kulula ukuyisebenzisa! Inento yokuba kufuneka ubaleke kangangoko kwaye wenze iintlobo zeepirouettes. Nangona kunjalo, kufuneka ukhwebise imiqobo emikhulu kwaye uqokelele amanqaku amaninzi kangangoko.
Kufuneka nje yenza ukubamba eskrinini kwaye umdlali uya kutsiba. Ukuba ufuna i-pirouettes, kuya kufuneka uyicinezele. Iipirouettes ezingakumbi ozenzayo, uya kufumana amanqaku.
#04 Umdyarho webhayisekile
Kuyonwabisa Umdyarho wezithuthuthu, Oko kuya kuba lula kwaye kube ngumlutha kakhulu. Inokudibana namanqanaba ngokwenza imigangatho kunye nokufaka imiqobo ekukuncedeni uzuze amanqaku.
Inamanqanaba ahlukeneyo, kunye neemeko-bume (ihlobo nobusika), eziya kuba nzima kwaye zibe mnandi kunezinye.
#03 Ulwandle lwe-Oceanhorn
umdla dlala indima, enikezela isenzo kunye nokuzonwabisa kumaqonga amaninzi. Kuyo, kuya kufuneka udlule kwi-archipelago apho uya kufumana khona izakhono ezahlukeneyo.
Lo mdlalo unenqanaba elinye kuphela, nangona kunjalo, uguquka ube luhambo olude kakhulu kwaye luyonwabisa kakhulu.
#02 Ukungqubana kwamaqela
Mhle umdlalo weqhinga, apho kuya kufuneka wakhe khona idolophu enabalinganiswa abaninzi. Abathathi-nxaxheba kuya kufuneka bazaliswe ngezakhono zokugqibezela imisebenzi eyahlukeneyo.
Inemigangatho emibini, eyokuqala isekwe bakhe ezona zakhiwo zihle, iyithatha kwidolophu. Inqanaba lesibini liphumelela iimfazwe ezinzima kunye neentshaba zakho.
Iyajika ibe ngumdlalo ogqityiweyo, oya kukuqinisekisa uyolo olungapheliyo
#01 IPhuli yeBhola ye8
Lo mdlalo ulinganisa umdlalo weklasikhi yasimahla, kwaye ukuyikhuphela akusayi kufuneka ube nenkumbulo enkulu, ilula kakhulu! Inika imodyuli yokuyidlala yodwa, njengakwabadlali abaninzi.
Eyona midlalo uyiphumeleleyo, kokukhona uya uyifumana isixa samanqaku kunye neengqekembe. Iyajika ibe ngomnye wemidlalo eya kuthi ngokuqinisekileyo ikhuphe isizungu.
Okokugqibela, imidlalo engayifuniyo i-intanethi iluncedo kakhulu kwezinye iindawo. Ngelixa kuyinyani ukuba, kweli xesha lethu kunzima ukuba ne-intanethi, asikubaleki ukuba kwindawo engenamqondiso okanye ngaphandle.
Sinethemba lokuba uluthandile olu khetho imidlalo xa ungenayo i-intanethi, Nokuba ukhetha ntoni na, uya konwaba kakhulu.
1 I-20 ephezulu yemidlalo engcono ngaphandle konxibelelwano lwe-Intanethi
1.1 #20 Ukuqhutywa kwetempile 2
1.2 #19 Amagama enqamlezo
1.3 #18 Qhagamshela Zonke
1.4 #17 Turbo ngokukhawuleza
1.5 #16 I-OpenTTD
1.6 #15 2048
1.9 #12 Ubuncinci
1.11 #10 Iintaka ezinomsindo
1.12 #09 I-Asphalt 8: I-Airborne
1.13 #08 Umdyarho wokuHamba weNduli i2
1.14 #07 Ukutyhoboza kwepipi
1.15 #06 Iziqhamo ninja
1.16 #05 Ukonwaba kukaAlto
1.17 #04 Umdyarho webhayisekile
1.18 #03 Ulwandle lwe-Oceanhorn
1.19 #02 Ukungqubana kwamaqela
1.20 #01 IPhuli yeBhola ye8